Lwesine 7 Januwari 2021
Ihholo Lombukiso Kusuka ekwakhiweni kwedolobha kuya enkombeni ukuze kuqondwe futhi kukalwe ibhalansi yokwakhiwa, isisho sedolobha sigcwaliswe esikhaleni sesithathu, ngokwakhiwa nokwakhiwa kwamadolobha ukukhuthaza amabhizinisi, idolobha kanye nombono wabantu ngoshintsho lwedolobha nezimpawu zasemadolobheni nezasemadolobheni ukugoqa kwesimo sezulu ukushintshanisa ukuchaza ukuqonda komklami wedolobha, bheka okwedlule kwedolobha ukubona ikusasa lakhe.
Lwesithathu 6 Januwari 2021
Isibani Setafula I-Oplamp inomzimba wobumba kanye nesisekelo sezinkuni esiqinile lapho kubekwa khona umthombo wokukhanya oholwayo. Ngenxa yokwakheka kwayo, okutholwe ngokuhlanganiswa kwezigaxa ezintathu, umzimba we-Oplamp ungashintshaniswa ube sezikhundleni ezintathu ezihlukile ezakha izinhlobo zokukhanya ezahlukahlukene: isibani setafula eliphakeme esinokukhanya okuzungezile, isibani setafula eliphansi esinokukhanya okuzungezile, noma amalambu amabili we-ambient. Ukulungiswa ngakunye kwezihlanganisi zesibani kuvumela okungenani eyodwa yezinsimbi zokukhanya ukuthi zisebenzisane ngokwemvelo nezilungiselelo zezakhiwo ezizungezile. I-Oplamp yakhelwe futhi yakhiwe ngokuphelele e-Italy.
Isibani Setafula Eliguqukayo
Lwesibili 5 Januwari 2021
Isibani Setafula Eliguqukayo Ukubonakala kwe-poobatic kwePoise, isibani setafula eklanywe nguRobert Dabi we-Unform.Studio siguquka phakathi kokuma nokuguquguqukayo nokuma okukhulu noma okuncane. Ngokuya ngobungako obuphakathi kwendandatho yayo ekhanyisiwe nengalo eyibambile, kwenzeka ulayini ohlangana noma olengayo oya esiyingini. Lapho ibekwa eshalofini eliphakeme, iringi yayingaphezulu kweshelufu; noma ngokutshekisa indandatho, yayingathinta udonga oluzungezile. Inhloso yalokhu kulungiswa ukwenza umnikazi abambe iqhaza ngobuciko futhi adlale nomthombo wokukhanya ngokulingana nezinye izinto ezizungezile.
Msombuluko 4 Januwari 2021
Iphosta Yombukiso Isihloko esithi Optics and Chromatic sibhekisa empikiswaneni phakathi kukaGoethe noNewton ngohlobo lwemibala. Le mpikiswano imelelwa ngukungqubuzana kwezingoma eziyifomu yezinhlamvu ezimbili: eyodwa iyabalwa, i-geometric, ngemidwebo ebukhali, enye ithembele ekudlaleni okubonakalayo kwemithunzi enemibala. Ngo-2014 lo mklamo usebenze njengesembozo sePantone Plus Series Artist Covers.
Sonto 3 Januwari 2021
Indandatho Indandatho kaGabo yenzelwe ukukhuthaza abantu ukuthi baphinde babheke uhlangothi oludlalayo lwempilo okuvame ukuthi kulahleke lapho umuntu mdala efika. Umklami ukhuthazwe izinkumbulo zokubuka indodana yakhe idlala nekhiyubhu lakhe lemilingo elimibalabala. Umsebenzisi angadlala ngendandatho ngokujikeleza amamojula amabili azimele. Ngokwenza lokhu, imibala yamatshe ayigugu noma isikhundla samamojula singalinganiswa noma silinganiswe. Ngaphandle kwesici sokudlala, umsebenzisi unokukhetha ukugqoka indandatho ehlukile nsuku zonke.
Mgqibelo 2 Januwari 2021
Ukuzijabulisa Kulo msebenzi wobuciko oyingqayizivele, u-Olga Raag wasebenzisa amaphephandaba ase-Estonia kusukela ngonyaka lapho imoto yakhiqizwa khona okokuqala ngo-1973. Amaphephandaba aphuzi eMtapowolwazi Kazwelonke athathwa izithombe, zahlanzwa, zalungiswa, futhi zahlelwa ukuze zisetshenziswe kulowo msebenzi. Umphumela wokugcina wanyatheliswa ezintweni ezikhethekile ezisetshenziswa ezimotweni, ezithatha iminyaka eyi-12, futhi kwathatha amahora angama-24 ukufaka isicelo. I-Free Estonia iyimoto edonsela ukunaka, abantu abaseduze abanamandla amahle nostalgic, imizwa yobuntwana. Imema ilukuluku lokuzibandakanya nokuzibandakanya kusuka kuwo wonke umuntu.
Ihholo Lombukiso Isibani Setafula Isibani Setafula Eliguqukayo Iphosta Yombukiso Indandatho Ukuzijabulisa